You are here: Home somal Xulka Daad-Madheedh Oo Kulankii Ugu Horeeyay Ee Gobollada Barriga Guul Ka Gaadhay Togdheer
Kulankan labada gobol ay iskaga hor-yimaadeen oo ahaa furitaankii ayaa waxaa ka soo qeyb-galay masuuliyiinta wasaaradda ciyaaraha oo uu hogaaminayo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cabdi Kaahin (Casood), masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo uu hor-kacayo Badhasaabka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye, Wasiirka iyo Wasiiru Dawlaha wasaaradda Waxbarashada, Badhasaabada iyo Maayarada gobollada ka qeyb-galaya ee Barriga, masuuliyiin iyo marti-sharaf.
Ka dib khudbadihii kala duwanaa ee halkaas laga jeediyay waxaa bilaabantay ciyaartii, waxaana labada tababare ay garoonka soo gashadeen ciyaartoydii ay bidayeen inay guul u keeni karaan, weerar iyo weerar celis ay labada gobollba la yimaadeen qeybtii hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay bar-baro goolal la’aan ah iyadoo labadooduba fursadihii ugu fiicnaa ee ay abuurteen ka faa’ideysan waayey.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa gobollka Togdheer uu garoonka la soo galay dar-dar xoogan taasi oo uu ku doonayay inuu hogaanka ciyaarta gacanta ku dhigo, laakiin taasi waxaa beeniyay goolhayaha iyo difaacyada gobollka Daad-Madheed.
65-daqiiqo markii ay ciyaartu socotay qeybtii labaad ayaa gobollka Daad-Madheedh ay hogaanka u qabatay ciyaarta, markii Cabdicasiis Qucle uu goolka ka soo toogtay banaanka xerada goolka, isagoo kubad gantaal ah shabaqa dhex dhigay wallow goolhayuhu uu qabtay hadana ay ka fakatay.
Iyadoo sawaxanka garoonka ka soo baxayay uu cirka isku shareeray ayaa waxa uu garoonku uu hal mar isla kacay markii daqiqiadii 79-aad gobollka Togdheer fursad gool noqon lahaa ay iska khasaariyeen, markaas oo kubad nadiif ahayd oo uu shabaqa ku hubsan lahaa uu khasaariyey mid ka mid ah weerar yahanada Togdheer.
Intaas wixii ka dambeeyay gobollka Daad-Madheedh ayaa xidhay suunka difaaca, waxaana ay ku guuleysteen inay giijistaan suunkooda taasi oo wakhtigii ciyaarta loogu tallo-galay ay soo idlaatay. Waxaana ay ciyaartii ku soo dhamaatay 1-0 uu ku badiyay gobollka Daad-Madheedh oo marti u ahaa gobollka Togdheer.
Waxaa maalinta Berrito iyaguna fooda is dari doona labada gobo lee Xaysimo iyo Badhan oo iyaguna ka mid an groupkan.